ပင်မစာမျက်နှာ - Aesthetic & Plastic Surgery Center In Yangon: The Clinic De Novo
The Clinic De Novo ကို ဘာလို့ရွေးသင့်တာလဲ?
သင်၏ထာဝရအလှတရားကို အသင့်ကြိုလင့်စောင့်စားနေမည့်နေရာဖြစ်သည့် The Clinic De Novo မှ ကြိုဆိုပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်အခြာကျသည့်ကဏ္ဍ(၄)မျိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့ဆေးခန်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
• Customer များအတွက် အရည်အသွေး အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံ။
• အကောင်းဆုံး ကုသမှုအကျိုးရလဒ်။
• အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း နှင့်
• သင့်တော်သည့်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။
Clinic De Novo တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Customer များကို five star အဆင့်မီသော service များပေးနိုင်ရန် အမြဲကြိုးပမ်းလျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအနှီး အင်အားကို အကောင်းဆုံး ၀န်ထမ်းများနှင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ အပေါ် ရင်နှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် customer များအား စိတ်ကြည်နူးဖွယ်ရာ အကျိုးရလဒ်များကို အချိန်တိုအတွင်းဈေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့်ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
စိုးရိမ်မှုကင်းပြီး လုံခြုံမှုရရှိသည့် ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မည့် ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးထားသော ၀န်ထမ်းလေးများက သင့်ကိုနွေးထွေးပျူငှာစွာ ကြိုဆိုပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆေးခန်းရှိ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဆရာဝန်များက မည်သည့် ကုသမှုမျိုးကမ်းလှမ်းရမည်ကို အတိအကျ သိပါသည်။ ထိရောက်သော ကုသမှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန် အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါသည်။
အလင်းကုထုံးကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်တကြိမ်တည်းကို သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားစေလို့ပါ စိတ်ရှည်ရှည်ရှင်းပြပေးတဲ့ဆရာဝန်မမလေးနဲ့ ဆိုင်ကမမတွေရဲ့ customerကိုအလေးထားတာလေးကို ပြောပြမတက်အောင် သဘောကျမိပါတယ် Marchလအတွင်းအထူးမွေးနေ့လက်ဆောင် microdermabrasion လုပ်ခွင့်ပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် Skincare treatmentအတွက်ဆို The clinic demo voကိုသာရွေးချယ်ကြပါလို့...feedbackလေးပေးချင်ပါတယ်
Khine Wintyee Htet
Moringa Mask က အသားအရေ ကို နူးညံပြီး ကြည်လင်သွားတယ် ဆိုင်က၀န်ထမ်းတွေလည်း အရမ်းကိုဖော်ရွေကြတယ် အရမ်းကြိုက်သွားပြီလေ.....
Hello စစ်တို့ရေ Clinic De Novo မှာလေ အဆီဖု ဝက်ခြံလေးတွေ အတွက် Treatment သွားလုပ်ခဲ့တာ အရမ်းသဘောကျ နေလို့ အတွေ့ ကြုံလေး ပြန် Share ပါရစေနော် သူက လုပ်ပြီးပီချင်း ကို မျက်နှာလေးက ကြည်သွားပါတယ်ပီးတော့ ဝင်းဝင်းလေး ဖြစ်တာကိုမြင်ရပါတယ် ၂/၃ ရက်လောက် အတွင်း၂ တဖြည်း အဆီ ဖုလေးတွေပါ ပါးလာပါတယ် .. ကိုယ်တွေလို အဆီဖု ဝက်ခြံသမားတွေ အတွက် တော့ တကယ် အဆင်ပြေပါတယ် 1. သူက လုပ် တဲ့ အခါ ပထမ ဆုံး Make up တွေကိုယ် သန့်စင်ပေးပါတယ် 2. ပီးတော့ မျက်နှာကို Scrub လုပ်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးဒါပေါ့နော် ( အဒီအချိန်လေးက တော်တော်ဇိမ် ရှိပါတယ် ) 3. အဒါ တွေ ပြီးတဲ့ အခါ မှာတော့ ဝက် ခြံ ညှစ်ပေးပါတယ် ( အဆီခဲလေး တွေ ကိုထုတ် ပေးတာပေါ့နော် နည်းနည်း လေး နာပါတယ် ဒါ မဲ့ ပြီးရင် တော်တော် ချောချောလေး ဖြစ်သွား မှာ မို့နည်းနည်း သီခံပေါ့နော် ) 4. ပီးရင်တော့ ဆေးရည်လေး လိမ်းပေးပါတယ် ( ပိုးသတ်ဆေး သဘောမျိူး ထင်တယ် နည်းနည်းစပ်တယ် ) 5. အဆုံးသတ်လေးမှာတော့ အစိုဓတ်ရအောင် Moisture နဲ့ Sunscreen လေး ကို ပြန်လူး ပေးပါတယ် အားလုံးပြီးတော့ ကိုယ့် မျက်နှာလေး ကို ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းလေး မြင်ရတာ ကျေနပ်စရာ ပါ ခြုံပြောရရင်တော့ Treatment လုပ်နေချိန်ရော ပီးသွားတဲ့ Result လေးကိုရောသဘော ကျလို့ Share လုပ်ဒါပါ တစ်ခါ မှ မရေးဖူးလို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော် သိချင်တာ ရှိလည်းမေးကျပါ စစ်တို့ရေ ...
Yati Chue Lay
Dip.in Advanced Skin & Beauty Diagnosis (NZ)
Cert. in Aesthetic Dermatology (Bangkok)
International Fellowship in Aesthetic Medicine (IFFAAS,IMCAS)
Aesthetic & Operational Consultant (The Clinic De Novo)
Plastic & Reconstructive Surgeon(အစားထိုးပွုပွငျခှဲစိတျအထူးကုဆရာဝနျကွီး)